फिल्म ‘पासवर्ड’को प्रेमियरमा सन्नीले गरिन् मिडिया साक्षात्कार - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda: Always Exclusive Entertainment News Portal Site
फिल्मी फण्डा । बलिउड स्टार सन्नी लियोनी यतिबेला काठमाडौमा छिन् । फिल्म ‘पासवर्ड’को प्रेमियरमा सहभागी हुन उनी काठमाडौ आइपुगेकी हुन् । सन्नीले बिहीबार साँझ कुमारी हलमा आयोजना गरिएको फिल्मको रेड कार्पेटमा सहभागीता जनाइन् । जहाँ उनले नेपाली फिल्ममा काम गर्दाको आफ्नो अनुभव साट्नुका साथमा मिडिया साक्षात्कार गरिन् ।
कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर देशमा उपस्थित हुन पाउँदा आनन्दित महशुश भएको छ । यस्तै, मलाई यो निकै नै उत्साहजनक समयमा सहभागी हुन पाउँदा खुशी लागेको छ ।’ सन्नीले शुक्रवार नेपालका केही स्थानमा भ्रमण गर्ने छिन् । उनले फिल्ममा समावेश ‘आजको साम….’ बोलको गीतमा उनले आइटम डान्स गरेकी छिन् । प्रेमियरमा फिल्म युनिटको साथमा नायक भूवन केसी, निर्देशक दीपाश्री निरौला पनि हलमा पुगेका थिए ।
एक्सन थ्रिलर जनराको फिल्म ‘पासवर्ड’मा अनुप बिक्रम शाही, छुल्ठिम गुरुङ, बुद्धि तामाङ, बिक्रान्त बस्नेत, रविन्द्र झा, प्रविण खतिवडा, लिशा सुनार, परि राना लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई बिक्रम जोशी र अमित बस्नेतले निर्माण गरेका हुन् । फिल्म भदौ २७ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको छ ।
नेपाली फिल्म उद्योगलाई बचाउन आवश्यक छ : सोहित मानन्धर
कलाकारको अश्लिल भिडियो कसले बनायो ? साईबर क्राईममा पर्यो उजुरी
हलिउड स्तरमा गोर्खाली पहिचान बोक्ने ‘गोर्खा वारियर’ (टिजर)
बर्षाको अराष्ट्रवाद अभिव्यक्ति र क्षमायाचना
बर्षा राउत, राष्ट्रियताको विपक्षमा बोल्ने तिम्रो हैसियत के ?
रिचा थापा र यशराजको ‘लभ यु हमेशा’ युट्युबमा (पुरा फिल्म)
स​ल​मान​को ‘भाई-भाई’ सामाजिक​ स​न्झाल​मा भाईर​ल​ (गीत​ स​हित​)
‘मलंग’को सिक्वेल आउँदै(मलंग फिल्म सहित)
भिडियो हटाउन नेपालले पठायो अनुष्कालाई ‘लिगल नोटिस’
चलचित्र पत्रकारिता दिवस : हेटौंडा, चितवन र पोखराको पुरस्कार घोषणा, दाङले गर्यो रक्तदान